Izindaba - IShanghai Jianzhong ikusekela ngokuqinile ukuvimbela nokulawulwa kwalolu bhubhane, ingeza ulayini wokukhiqiza imask we-Enpak
Inzalo Paper Bag
Inzalo yokuvala inzalo, i-gusseted, uphawu lokushisa
Inzalo Reels, flat, ukushisa uphawu
Inzalo Pouches, gusseted, ukushisa seal
Inzalo Pouches, flat, self uphawu
Inzalo Pouches, flat, ukushisa uphawu
Ama-Reels nama-Pouch okokufaka inzalo kaTyvek
Ukusonga Iphepha leCrepe
Iphakethe Lokuhlola le-Bowie & Dick
Izikhwama zeTyvek Header
Isikhwama sokuphefumula esiphakathi
Aluminium Ucwecwe Izikhwama
IShanghai Jianzhong isekela ngokuqinile ukuvinjelwa nokulawulwa kwalo bhubhane, ingeza umugqa wokukhiqiza imask we-Enpak
IShanghai Jianzhong inkampani egxile ekukhiqizeni imikhiqizo yokulawula izinzwa. Ngemuva kokubona ukubhabhadiswa kobhubhane lomqhele omusha, impi engenamandla okuqhuma isibhamu, inkampani yethu yakhe umugqa omkhulu wokukhiqiza imaski, futhi umphumela ozinzile wamaski omkhiqizo we-Enpak ufinyelela kuma-50,000 ngosuku. Ngokugcwaliswa kancane kancane kwesidingo sasekhaya, inkampani yethu ikhulise ibhizinisi layo emazweni angaphandle. Njengamanje, kunezinhlobo ezimbili zamamaski ezithunyelwa ngaphandle: izifihla-buso ezilahlwayo nezimaski zokuhlinza zezokwelapha. Amazwe athumela ngaphandle afaka emazweni angaphezu kwama-50 kubandakanya iYurophu, i-Southeast Asia, kanye ne-Middle East.
Inkampani yethu ine workshop ephelele yokukhiqiza imaski. Indawo yokusebenzela ehlanzekile engenaluthuli enamazinga ayi-100,000 ihlangabezana nezindinganiso zokusebenzela zokukhiqiza imaski. Inqubo yokukhiqiza ihambisana ne-ISO13485: 2016 "Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi Yedivayisi Yezokwelapha Yezimfuneko Zokulawula". Izinqubo eziyisithupha ezinkulu ezenza ukuthi igciwane lisebenzise leli thuba: 1. Umucu wamakhala wepulasitiki, ulingane kangcono ikhala; 2.Fit design ebusweni, ahlinzeke adhesion best; 3. Ukotini omsulwa amabhande endlebe nokunwebeka okumsulwa, izindlebe ezikahle nezingaqinile; 4. Ukwelashwa kwe-Electret, ukuthuthukisa umphumela wokuhlunga, ukungena kwamandla komoya okungcono; 5. Ingcwecwe yabahle kakhulu enobungane besikhumba, emnene futhi engacasuli; 6. Ukuhlangana okungenamthungo, okuhle nokuphana.
Inkampani yethu ineziqu zokuthekelisa okuphelele nokunikezwa okuzinzile. Ukunikezwa isitifiketi kwe-European CE, imaski yokuhlinzwa yezokwelapha nayo ingezwe ohlwini lwabamhlophe boMnyango Wezokuthengiswa Kwangaphandle. Inkomba ngayinye yemaski inombiko wesitifiketi se-ejensi yokuhlola: umbiko wokuhlola okhishwe yi-TUV South German Certification and Testing Center ehlangabezana nezimaski zokuhlinza ezilahlwayo ze-EN14683 EU; ukuhlolwa kwe-PONY Puni kukhiphe ukusebenza kahle kokuhlunga okungama-99%, futhi izidingo zokumelana nokuphefumula zihambisana nombiko we-GB T 32610 -2016 Wokuhlolwa kwemaskhi yokuvikela nsuku zonke. Inkampani yethu inomthamo wokukhiqiza ozinzile, ukulethwa ngesikhathi esifanele, nesilinganiso sesikweletu se-A iminyaka eminingi. Kuyinkampani enokubambisana kwesikhathi eside.
Endleleni, siyabonga. Ngibonga ukwesekwa nosizo lwabaholi kuwo wonke amazinga. Ubhadane luzodlula ekugcineni. Ukuqaphela ngezikhathi zokuthula nokuba namandla ukusinda kwenkampani isikhathi eside. Ngaphakathi, siguqula uhlelo lokuphatha, sakhe uhlelo lwamabhizinisi lwamanje oluphelele, sisheshise ubuchwepheshe obusha, futhi sithuthukise ukuncintisana okuyinhloko kwemikhiqizo; ngaphandle, silwela ukwephula ubumnini bobuchwepheshe bakwamanye amazwe nezithiyo zokuhweba, futhi sithuthukise idumela lamazwe omhlaba kanye nedumela lemikhiqizo kazwelonke Ngalesi sizathu, ngithemba ukuthi obuso be-Enpak bathengisa kahle emhlabeni wonke.
IShanghai Jianzhong Medical Packaging Co., Ltd.
Ucingo: 0086- (0) 21-54315666
Isibhedlela Samazwe Ngamazwe Nezokwelapha ...
I "Isibhedlela Samazwe Ngamazwe Nezinsiza Zokwelapha ...
IShanghai Jianzhong isekela ngokuqinile ...
IShanghai Jianzhong inkampani egxile ekukhiqizeni isilawuli sezinzwa ...
Amathuba nezinselelo zihlala ndawonye, ​​futhi ...
Eminyakeni yamuva, ngokuthuthuka okusheshayo komkhandi wezemithi ...